प्राइममा विलय हुन लागेको कैलाश विकास बैंकको सेयरमूल्य समायोजन
काठमाण्डौ । प्राइम कमर्सियल बैंकमा विलय हुन लागेको कैलाश विकास बैंकको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) ले गत आर्थिक वर्षका लागि बैंकले प्रस्ताव गरेको १६ प्रतिशत बोन सेयरका लागि सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो । नेप्सेले सेयरमूल्य समायोजन गर्दै यो बैंकको प्रतिकित्ता सेयर २०५.१७ रुपैयाँ कायम गरेको छ । प्राइमसँग...
आरएमडीसी लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन, अब कतिमा खुल्नेछ कारोबार ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित बोनस सेयरका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य शुक्रबार समायोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि आरएमडीसी लघुवित्तले चुक्तापुँजीको १२.५ प्रतिशतले हुन आउने बोनस सेयरका लागि नेप्सले सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो । नेप्सले सेयरमूल्य...
स्पर्स लघुवित्त र अरुण भ्यालीको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले स्पर्स लघुवित्त वित्तीय संस्था र अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडका सेयरमूल्य बिहीबार समायोजन गरेको छ । नेप्सेले स्पर्स लघुवित्तको १३ प्रतिशत र अरुण भ्यालीको ७ प्रतिशत बोनस सेयरका लागि सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ । नेप्सेले सेयरमूल्य...
बुटवल पावर कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट प्रस्तावित बोनस सेयरका लागि बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडको सेयरमूल्य बुधबार समायोजन गरिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले गत वर्षका लागि १० प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गरेको बुटवल पावरको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ति ३२० रुपैयाँ कायम गरेको हो । अब समायोजित मूल्यअनुसार नै यो कम्पनीको सेयर...
आकर्षक लाभांश प्रस्ताव गरेको नबिल बैंकको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट आकर्षक लाभांश प्रस्ताव गरेको नबिल बैंक लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले गत आर्थिक वर्षका लागि १२ प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ता गरेको नबिल बैंकको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ । नेप्से सेयरमूल्य समायोजन गर्ने नबिल बैंकको प्रतिकित्ता सेयर ६६९.६४ रुपैयाँ कायम गरेको छ ।...
बोनस सेयरका लागि सानिमा माई हाइड्रोपावरको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । बोनस सेयरका लागि सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेडको सेयरमूल्य सोमबार समायोजन गरिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले सानिमा माई हाइड्रोपावरले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने भनी प्रस्ताव गरेको १० प्रतिशत बोनस सेयरका लागि सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो । नेप्सले सानिमा माई हाइड्रोपावर सेयरमूल्य...
एनएमबी र एभरेस्ट बैंकसहित चार वित्तीय संस्थाको सेयरमूल्य समायोजन, कति भयो कायम?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जले बोनस सेयरका लागि एनएमबी बैंक र एभरेस्ट बैंकसहित चारवटा वित्तीय संस्थाको सेयरमूल्य शुक्रबार समायोजन गरेको छ । नेप्सेले एनएमबी बैंक, एभरेस्ट बैंक, पोखरा फाइनान्स र इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो । नेप्सेले सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता एनएमबी बैंकको...
नयाँ नेपाल लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले बिहीबार बोनस सेयरका लागि नयाँ नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। नयाँ नेपाल लघुवित्तले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको २० प्रतिशत बोनस सेयरका लागि नेप्सेले संस्थाको सेयरमूल्यमा समायोजन गरेको हो । नेप्सले नयाँ नेपाल लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै...
बोनस सेयरका लागि तीन वित्तीय संस्थाको सेयरमूल्य समायोजन, क–कसको कति–कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले तीनवटा वित्तीय संस्थाको गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित बोनस सेयरका लागि सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ । नेप्सेले मंगलबार स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था, नेपाल एग्रो लघुवित्त वित्तीय संस्था र श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ । नेप्सेले...
बम्पर लाभांश प्रस्ताव गरेको निर्धन उत्थान लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट बम्पर लाभांश प्रस्ताव गरेको निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले गत वर्षको मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई निर्धन उत्थान लघुवित्तले प्रस्ताव गरेको २५ प्रतिशत बोनस सेयरका लागि सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ । नेप्सेले निर्धन...
बोनस सेयरका लागि नेपाल बंगलादेश बैंकको सेयरमूल्यमा समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । गत वर्षको मुनाफाबाट प्रस्तावित बोनस सेयरका लागि नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेडको सेयरमूल्यमा समायोजन गरिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले नेपाल बंग्लादेश बैंकले गत वर्षका लागि आफ्ना सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने भनी प्रस्ताव गरेको ५ प्रतिशत बोनस सेयरका लागि सेयरमूल्यमा समायोजन गरेको छ । नेप्सेले यो बैंकको सेयरमूल्य...
लक्ष्मी र मुक्तिनाथ विकास बैंकको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने भनी प्रस्ताव गरिएको बोनस सेयरका लागि मुक्तिनाथ विकास बैंक र लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको सोमबार सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले दुवै बैंकको सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो । नेप्सेले सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता मुक्तिनाथ विकास बैंकको २६५.३२...
बोनस सेयरका लागि सूर्योदय र चौतारी लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले बोनस सेयरका लागि दुई लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ । नेप्सेले सूर्योदय लघुवित्त र चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो । नेप्सले सेयरमूल्य समायोजन गर्दै सूर्योदय लघुवित्तको प्रतिकित्ता सेयर ५४८.८७ रुपैया र चौतारी लघुवित्तको ४३३.६४ रुपैयाँ कायम गरेको छ...
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जले बम्पर लाभांश घोषणा गरेको सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शुक्रबार सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ । संस्थाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको ३२ प्रतिशत बोनस सेयरका लागि नेप्सेले सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ । नेप्सेले संस्थाको सेयरमूल्य समायोजन गर्दैै प्रतिकित्ता ६०९.०९ रुपैयाँ कायम...
काठमाण्डौ । गत वर्षको बोनस सेयरका लागि गणपति माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य बुधबार समायोजन गरिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले ७ प्रतिशत बोनस सेयरका लागि गणपति माइक्रोफाइनान्सको सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो । नेप्सेले संस्थाको संस्थाको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता ४६२.६२ रुपैयाँ कायम गरेको छ । अब...